हिमाली बस्तीमा चिसो बढेसंगै भूकम्प पीडित मारमा
२०७४ मंसिर १ गते १२:३७
सिन्धुपाल्चोक । जिल्लाको हिमाली बस्तीमा चिसो बढेसंगै भूकम्प पीडित मारमा परेका छन् । भूकम्पबाट अति प्रभावित बनेका क्षेत्रमा अहिलेसम्म पक्की आवास निर्माण गर्न नभएछि उनीहरु थप समस्या परेका हुन् । चिसोबाट उच्च हिमाली बस्ती सेलाङ, गोल्छे, गुम्बा, भोताङ, बरुवा, लागर्छे, माहाङ्काल लगायतका भेगका भूकम्प पीडितलाई चिसोले सताउन थालेको गोल्छेका भूकम्प पीडित गौरव श्रेष्ठले बताए। उनी भन्छन्, 'कतिपय हिमाली भेगका ... read more...
हेटौडा । कैलाश गाउँपालिकाको १० नम्बर वडा भाल्टारमा भएको चुनावी सभामा एमाले र माओवादीसहित विभिन्न पार्टी परित्याग गरि ४ सय ४७ जना नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । विभिन्न पार्टी छाडेर सयौं नेता तथा कार्यकर्ता कांग्रेसमा प्रवेश गरेसंगै हेटौडा क्षेत्र नम्बर-२ मा नेपाली कांग्रेसको चुनाबी माहौल निकै राम्रो बन्दै गएको छ । कैलाश गाउँपालिकाको १० नम्बर भाल्टारमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रे ... read more...
बारामा चुनावी सरगर्मी: उम्मेदवारहरु भोट माग्दै मतदाताको घर–दैलोमा
२०७४ कार्त्तिक २८ गते १९:३३
बारा । बाम गठबन्धन र नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारहरुले सोमवार पनि निर्वाचन गतिविधि र घरदैलो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । बारामा प्रतिनिधि सभा–४ र प्रदेश सभाका लागि ८ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । जहां बाम गठबन्धनक र नेपाली काँगे्रसका उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा भोट माग्ने कार्य तिब्रता पारेका छन् । बाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुले संयृक्त रुपमा घरदैलो तथा चुनावी कार्यक्रमहरु संच ... read more...
एमाले फकाउंदै शाही, घरदैलोमा उम्मेदवार पुगेपछि मतदाता उत्साहित
२०७४ कार्त्तिक २८ गते १४:१६
कालिकोट । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार भूपेन्द्रजंग शाही घरदैलो अभियान अन्तर्गत जनताको आंगनमा पुगेपछि मतदाता उत्साहित बनेका छन् । नेपाल तरुण दलको महासचिव समेत रहेका युवा नेता शाही घरआंगन र खेतबारीमै पुगेर मतदातालाई भेट्ने तथा मत माग्ने अभियानमा सक्रिय भएपछि पुरै माहोल चुनावीमय भएको छ । मतदाताहरु समेत नेता घरदैलोमा आएको देखेपछि उत्साहित बनेका हुन् । उनले आज भ ... read more...
नेपालीभूमिमै भइरहेको सडक निर्माण हतियारसहित आएका एसएसबीले रोके
२०७४ कार्त्तिक २८ गते १०:१८
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको उत्तरी क्षेत्र जोड्ने गड्डाचौकी–ब्रह्मदेव सडक निर्माणमा भारतीय पक्षले अवरोध पुर्याएको छ । नेपाल–भारत सीमा पिलर ८०९ ९५ ‘ए’० नजिक निर्माण भइरहेको कालोपत्रे सडकमा ह्युमपाइपको विषयलाई लिएर भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अवरोध गरेको हो । नेपाली भूमिमै निर्माण भइरहेको सडकमा भारतीय पक्षले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै विवाद सुरु गरेको हो । हतियारसहित आएका ए ... read more...
एमालेका वडाध्यक्ष आफ्नै दलित महिला वडा सदस्यसंग रंगेहात भेटिएपछि...
२०७४ कार्त्तिक २७ गते ११:३८
गौशाला । गए राति साढे १० बजेतिर जलेश्वर–८ स्थित दलित महिला वडा सदस्यको घरमा वडाध्यक्ष विजयकुमार सिंह र दलित महिला वडा सदस्य दुवैलाई आपत्तिजनक अवस्थामा भेटेपछि उनीहरु पक्राउ परेका छन् । दुवैलाई आपत्तिजनक अवस्थामा रंगेहात भेटेपछि दलित महिला वडा सदस्यका देवर, ससुरा र जेठाजुले बाहिरबाटै दुवै जनालाई घरमा थुनेर गाउँलेलाई बोलाएका थिए । सो महिलाका घरका सदस्यहरु तथा गाउँलेले अध्यक्ष सिंह र दलित महिला ... read more...
बारा जिल्ला समन्वय समिति मधेशवादी दलको कब्जामा
२०७४ कार्त्तिक २६ गते १९:२५
बारा । जिल्ला समन्वय समिति बारामा मधेशवादी दलले कब्जा जमाउने निश्चित भएको छ । आउंदो २८ गतेका लागि तय भएको समन्वय समितिको निर्वाचनमा संयोजक पदका लागि एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । अन्य उम्मेदवारी नपरेपछि उनी स्वत सर्वसम्मत भएका हुन् । संयोजक पदमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) देवताल गाँउपालिका वडा न ४ निवासी नवलकिशोर सिंहले मात्र उम्मेदवारी परेको थियो । यसको औपचारी घोषणा भने मुख्य निर्वाचन अध ... read more...
काभ्रे कांग्रेस क्षेत्र नं.१ मा गजबको संगमः उम्मेदवारका समान ५ रहस्य
२०७४ कार्त्तिक २५ गते १०:२१
काभ्रे । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा काभ्रे कांग्रेसमा चुनाबी माहोल एकाएक गरम भएको छ । विशेषगरी, क्षेत्र नम्बर १ मा चुनाबी माहोल बढेको मात्र नभई कसैलाई थाहा नभएका धेरै रहस्य मतदातबीच कानुखुसि हुन थालेको छ । यसपटक काभ्रे क्षेत्र नं. १ मा गजबकै राजनीतिक संगम देखिएको छ । पहिलो त क्षेत्र नं. १ का तिनै जना उम्मेदवार जनजाती हुन् । दोस्रो, तीनै जना उम्मेदवारको थर एउटै अर्थात लामा ... read more...
सर्लाहीमा यादवको पक्षमा जनलहर देखिएपछि बाम गठबन्धनलाई तनाव
२०७४ कार्त्तिक २४ गते १४:१८
सर्लाही । सर्लाही क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका महेन्द्र यादवको पक्षमा ब्यापाक जनलहर देखिएको छ । यादव राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य समेत हुन् । अहिले नेता यादव आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा घरदैलो कार्यक्रममा निकै व्यस्त रहेका छ्न् । यादव आज सोही क्षेत्रको कविलासी नगरपालिकामा घरदैलो कार्यक्रम गर्न पुगेका हुन् । राजपा फोरमका साझा उम्मेदवार महेन्द्रराय यादव प्रतिनिधी स ... read more...
सर्लाहीमा सिंह आतंकः सिडियोलाई हटाइएपछि चुनाव निष्पक्ष हुनेमा आशंका
२०७४ कार्त्तिक २३ गते १९:००
सर्लाही । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) प्रदीपराज कंडेललाई पूर्व सांसद अम्रेशकुमार सिंहले हटाएपछि ब्यापक आलोचना भएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा एकदमै कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेको तथा सिंहका मान्छेलाई जिताउन बुथ लुट्न नदिएकै कारण उनी पूर्व सांसद सिंहको तारो बनेका थिए । सिडियो कंडेल २०१५ का ईन्ट्रीग्रिटी आइडल हुन् । स्थानीय निर्वाचन सकिने वित्तिकै उनलाई हटाएपछि अहिले जिल ... read more...
चेपाङको गुनासोः 'न उम्मेदवार आए, न भोट हाल्न सिकाए'
२०७४ कार्त्तिक २३ गते १५:१६
धादिङ । पृथ्वीराजमार्ग क्षेत्रमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चहलपहल बढ्दै गएको छ । यहाँका मतदाता मंसिर १० गते मतदान गर्ने दिन पर्खेर बसेका छन् । यहाँ वाम गठबन्धन र नेपाली काँग्रेसबीच मुख्य प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ । दुवै दलका कार्यकर्ता हरेक दिन नाचगान गर्दै मत मागिरहेका छन् । तर सडकमाथि रहेको चेपाङ बस्ती भने सुनसान छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न अघिल्लो दिन नै मतदान केन्द्र आएका ... read more...
बारामा नेपाली काँग्रेस, बामगठबन्धन र राजपा–फोरम गठबन्धनबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा
२०७४ कार्त्तिक २२ गते १६:२०
बारा । मुलुकका अन्य जिल्लाहरुमा जस्तै बारामा पनि चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । जिल्लाका सवै राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरु यतिखेर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका मतदाताहरुलाई रिझाउने काममा व्यस्त हुन थालेका छन् । आसन्न मंसिर २१ गते हुने चुनावलाई लक्षित गरेर जिल्लाका सबै राजनीतिक दलले चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिएका हुन । दलहरुले चुनाव प्रचारप्रसार समितिको कार्यालयहरु संचालन पनि त्यतिकै तिव् ... read more...
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय उद्घाटन
२०७४ कार्त्तिक २० गते १८:३५
सर्लाही । सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्ग्वामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको उद्घाटन भएको छ । सर्लाही क्षेत्र नं२ का मुख्य निर्वाचन अधिकृत माननीय न्यायाधीश राजेश काफ्लेको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवाल, सहायक जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेल, सहायक निर्वाचन अधिकृत मुकुन्द अचार्य, निर्वाचन कार्यालय प्रमुख दिवाकर भुजेल, अनुसन्धान प्रहरी प्रमुख लिलाधर पौड ... read more...
चार वटा शक्ति एकै ठाउंमा उभिएपछि कालिकोट कांग्रेस थप बलियो
२०७४ कार्त्तिक १९ गते १८:५३
कालिकोट, १९ कार्तिक । कालिकोटमा नेपाली काँग्रेसको पक्षमा राप्रपा प्रजातान्त्रिक, राप्रपा र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भएको लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार भुपेन्द्रजंग शाहीले बताएका छन् । कालिकोटमा चार वटा शक्तिहरु एकै ठाउंमा उभिएपछि कालिकोट कांग्रेस थप बलियो बनेको छ । चार पार्टीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेता शाहीले भने, 'अब लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई हराउने ताकत कसैसँग छैन् । कालिकोट जिल्ला ... read more...
सर्लाही, १६ कात्तिक । आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका पार्टीका उम्मेदवारहरुले उत्साहपूर्ण उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले बाजागाजा र कार्यकर्ताहरुका साथ नगर परिक्रमा गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराए । सर्लाहीको ४ निर्वाचन क्षेत्र र ८ प्रदेशको मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। क्षेत्र नं.१ को प्रत ... read more...
गरम सम्वन्ध, रोचक भिडन्तः नेताद्धय पौडेल र जोशीद्वारा तनहुँ-१ बाट उम्मेदवारी
२०७४ कार्त्तिक १६ गते २०:१५
तनहुँ, १६, कात्तिक । आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलेलेको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका दुवै नेताले तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि तनहुँमा निर्वाचन रोचक हुने देखिएको छ । दुवै नेता बाजागाजासहित उम्मेदवारी दिन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका थिए ... read more...
तनहुँ, १५ कार्तिक । नेपाली कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीले विहिबार विहान १२ बजे उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । उनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा जोशीले तनहुँ-१ बाट उम्मेदवारी दिन लागेका जानकारी गराएका हुन् । उनले भने,'नेपाली कांग्रेसको संसदीय बोर्ड नै वैधानिक छैन् । नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार बोर्डमा जम्मा १४ हुनुपर्नेमा २४ जनाको जम्बो टोली छ । त्यस्तो संसदीय बोर्डको कुनैऔचित्य छैन ... read more...
कालिकोट, १४ कार्तिक । नेपाल तरुण दलका महासचिव एवम् नेपाली काँग्रेस कालिकोट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार भूपेन्द्रजंग शाहीले कालिकोटबासीले आफुलाई जिताउने बताएका छन् । उनले भने, 'जनताको अदालतमा उभिएको छु, यसअघि मलाई अन्याय भएको थियो । यो मुद्दालाई मैले पुनरावलोकन गरेको छु । म निर्धक्क छु कि मलाई जनताको अदालतले जिताउने छ ।' उनले यो कुरा लोकतान्त्रिक गठबन्धन र चुनावी प्रचारप्रसारको विषयमा जानका ... read more...
कांग्रेस पार्टीको नजरमा ३ प्रभावशाली नेतृ प्रत्यक्षबाट भिड्दै
२०७४ कार्त्तिक १३ गते १९:०२
काठमाडौं, १३ कार्तिक । नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि प्रभावशाली महिलालाई प्रत्यक्षबाट चुनावी मैदानमा उतार्ने भएको छ । सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय समितिको बैठकले राजधानी बाहिरबाट डा.आरजु देउजा, डिना उपाध्याय र सिता गुरुङलाई प्रत्यक्षबाट चुनाबी मैदानमा पठाउने निर्णय गरेको हो । गुरुङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री हुन् भने उपाध्याय पार्टी केन्द ... read more...
प्रदेश नं. २ को राजधानी सर्लाही बनाइनुपर्ने, नभए कडा आन्दोलन
२०७४ कार्त्तिक १२ गते ०७:४१
सर्लाही, १२ कार्तिक । सर्लाहीबासीहरुले प्रदेश नं.२ को राजधानी ८ वटै जिल्लाको बीचमा पर्ने सर्लाही जिल्लालाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा आयोजना गरिएको प्रदेश नं.२ को राजधानी उपयुक्त स्थानमा राख्ने विषयक बृहत छलफल कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न पार्टीका नव निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुले सर्लाही ८ वटै जिल्लाको बीचमा रहेकोले राजधानीका लागि सर्लाही नै उपयुक्त हुने धारणा ... read more...